Ọhụrụ mmezi version nke VirtualBox 6.0.8 abịarute | Site na Linux
Na nso nso Oracle weputara uzo ohuru nke ngwa oru ya, VirtualBox 6.0.8, nke bụ nsụgharị mmezi nke na-edozi ụfọdụ njehie nke alaka 6.0 dị ugbu a, nke na mgbakwunye na mgbazi nke ọtụtụ njehie, dị ka mgbe niile, enwere nkwụsi ike.
Ọ bụrụ na ị maghị banyere VirtualBox, ị kwesịrị ịmara na nke a bụ nzube zuru oke zuru oke gbasara njikwa maka ngwaike. Ebumnuche na ihe nkesa, desktọọpụ, na itinye ya n'ọrụ, ọ bụ ugbu a ọ bụ naanị azịza maka ịba uru na-arụ ọrụ.
VirtualBox ngwa ndị bara uru n'ihi na ọtụtụ ndapụta: Na-agba ọsọ multiple sistemụ n'out oge. N'ụzọ dị otú a, onye ọrụ nwere ike ịme ngwa ha maka otu sistemụ arụmọrụ na ihe ọzọ (dịka ọmụmaatụ, ngwanrọ Windows na Linux ma ọ bụ Mac) na-enweghị ịmalitegharị iji ya.
A na-echekwa ntọala nhazi nke mebere ngwa ọrụ na XML na ha anaghịkwa arụ ọrụ na mpaghara igwe. Nkọwa nke igwe arụmọrụ, ya mere, enwere ike ibuga ya na kọmputa ndị ọzọ.
1 Banyere VirtualBox 6.0.8
2 Esi wụnye VirtualBox 6.0.8 na Linux?
Banyere VirtualBox 6.0.8
Dị ka e kwuru ná mmalite, ụdị ọhụrụ a nke VirtualBox 6.0.8 bụ mmezi mmezi na isi mgbanwe na mbipute anyị nwere ike mata na nsogbu na-arịọnụ nke isi modul na Linux usu usoro e edozi n'iji nhazi ma obu debugging na akaghi aru (dika mgbe igu modulu si na ntuziaka ozo).
Maka usoro ndị ọbịa dabeere na Linux na-akwado akwụkwọ ndekọ aha site na iji kernel 3.16.35 nke Linux ma dozie nsogbu nke inye ntughari akwukwo ndi ozo a na-agu.
Maka ndị ọbịa na ndị ọbịa Windows, agbakwunyere ikike iji ihe karịrị mkpụrụedemede 4096 na aha ndekọ aha.
N'ime mgbanwe ndị ọzọ dị na nsụgharị a, anyị na-ahụ:
API na-edozizi nhazi nke igwe akụrụngwa nke megidere igwe ndị ọzọ mebere na ọkwa UUID.
Edoziri nsogbu mgbe ị na-eweghachi steeti VM echekwara.
Njirimara onye ọrụ na-enye ngosipụta nke ụzọ zuru ezu na faịlụ ndị dị na windo "New Media".
Edozi nsogbu na ebugharị òké clicks ka mebere igwe na otutu ngosipụta mmasị.
Ofu okuku mgbe mechisịrị ọnụ ala a mebere igwe na-enweghị a ndịna ọkwọ ụgbọala.
Esi wụnye VirtualBox 6.0.8 na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụrụ a nke VirtualBox na distro ha, ha nwere ike ime nke a site na isoro ntuziaka ndị anyị kesara n'okpuru.
Ọ bụrụ na ha bụ ndị Debian, Ubuntu na ndị ọrụ nrụpụta Anyị na-aga n'ihu ịwụnye ụdị ọhụrụ ahụ, anyị na-eme nke a site na ịmepe ọnụ na ime iwu ndị a na ya:
Primero anyị ga-agbakwunye ebe nchekwa anyị na Source.list
Ugbu a, anyị gafere ibubata igodo ọha:
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-aga melite ndepụta nke nchekwa anyị:
N'ikpeazụ, anyị na-aga n'ihu ịwụnye ngwa na sistemụ anyị:
Ma ndi diri Fedora, RHEL, ndị ọrụ CentOS, anyị ga-emerịrị ihe ndị a, nke ibudata ngwugwu na:
N'ihe banyere Ihe ngwugwu OpenSUSE 15 maka sistemụ gị bụ nke a:
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị pịnyere:
Anyị na-etinye na:
Ugbu a iji nyochaa na echichi ahụ emeela:
N'ihe banyere Arch Linux, ịnwere ike ịwụnye site na AUR, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ịkwado ụfọdụ ọrụ maka Systemd, ya mere a na-atụ aro ka ị jiri Wiki nwee ike ịwụnye.
Dị ka nzọụkwụ ọzọ anyị nwere ike melite ọrụ nke VirtualBox Site n'enyemaka nke ngwugwu, ngwugwu a na-enyere VRDP aka (Virtual Remote Desktop Protocol), na-edozi nsogbu ahụ na obere mkpebi VirtualBox na-agba na ọtụtụ ndozi ndị ọzọ.
Iji wụnye ya, mee iwu ndị a:
Anyị na-anabata usoro na ọnọdụ ma wụnye ngwugwu.
Iji nyochaa na arụnyere ya n'ụzọ ziri ezi:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ọhụrụ mmezi version nke VirtualBox 6.0.8 abịarute